Jihada galmada: astaamaha, noocyada iyo qeexitaanada | Ragga Stylish
Waqtigan xaadirka ah, shaqo weyn ayaa la qabtaa si loo gaaro sinnaan xagga ixtiraamka dhammaan dadka leh jiheynta galmada, wax kastoo ay tahayba. Hadday yihiin khaniis, lesbian, heterosexual iyo bisexual, jihada galmada waxay loola jeedaa dadka aan soo jiidanay iyo kuwa aan rabno inaan galmo iyo xiriir wadaag wadaagno.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato nooca galmada iyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin.
1 Jihaynta galmada sida ku xusan jinsiga
2 Noocyada jihada galmada
3 Waa maxay asal ahaanta iyo ereyga queer
Jihaynta galmada sida ku xusan jinsiga
Ujeeddada galmada waxay la xiriirtaa cidda aad ku soo jiidaneyso iyo cidda aad dooneyso inaad la yeelato xiriir jaceyl, shucuur iyo galmo. Way ka duwan tahay aqoonsiga jinsiga. Aqoonsiga jinsigu lama xidhiidho shaqaalaha aad soo jiidanayso iyo inuu yahay qofka aad tahay. Taasi waa, aqoonsigaaga lab ama dhedig inaad tahay lab ama dhidig. Jihaynta galmada waa ku soo jiidashadaada. Tan macnaheedu waa ahaanshaha transgender wuxuu dareemayaa in jinsigaaga laguu xilsaaray uu aad uga duwan yahay jinsiga aad isku aqoonsan tahay. Inaad noqoto khaniis, lesbian ama bisexual la mid maaha inaad dareento haweeney nin dhasho.
Jihaynta galmada waxay la xiriirtaa qofka aad rabto inaad la joogto, halka aqoonsiga jinsiga uu la xiriiro qofka aad tahay.
Noocyada jihada galmada
Aan aragno maxay yihiin noocyada aqoonsiga ee la xiriira jihaynta galmada:
Dhammaan dadkaas soo jiitay jinsi ka duwan ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin heterosexual. Tusaale ahaan, hadday naag tahay oo aad nin ku soo jiidanayso, waxaad tahay naag lab iyo dheddig ah.
Dadka ay soo jiitaan dadka ay isku jinsiga yihiin waxaa badanaa loo arkaa inay yihiin khaniis. Dumarka yaa soo jiitaan dumarka kale waxaa lagu yaqaan magaca dumarka isku galmooda, halka ragga ragga kale soo jiitay lagu yaqaan magaca gay.
Dadka soo jiita ragga iyo dumarkuba waxay isugu yeeraan bisexual.
Waxaan sidoo kale leenahay kuwa soo jiitay fursadaha kala duwan ee aqoonsiga jinsiga, ha ahaato lab, dhedig, jinsi, jinsi, intersex, iyo kuwo kale iyo waxaa loogu yeeri karaa inay yihiin khaniisiin.
Dadkaas oo aan si buuxda u hubin u jeedadooda galmada waxaa loo sheegi karaa inay shaki ku jiraan maxaa yeelay waa dad xiise leh.
Ugu dambeyntiina, waxaan sidoo kale leenahay kuwa aan dareemin nooc ka mid ah soo jiidashada galmada qofna waxaana loo yaqaan 'asexual'.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in ay jiraan dad badan oo aan dareemin in lagu aqoonsaday ama wakiil ka yahay mid ka mid ah calaamadahan. Waxaana jira dad kuwaas ma tixgelinayaan in lagu daro calaamado ama koox gaar ah. Qaar kale waxay ku qanacsan yihiin nooc ka mid ah calaamadaha laakiin kuwa kale maahan. Dhamaadka maalinta, qof kasta ayaa go'aaminaya nooca ay tahay in lagu sifeeyo ama haddii aan lagu sharraxin.
Waa maxay asal ahaanta iyo ereyga queer
Ereygan waxaa loo waafajiyay Isbaanishka iyadoo loo yaqaan 'cuir' waxaana loo tarjumay mid yaab leh. Waxay ka koobnaan kartaa aqoonsiyo jinsi iyo jinsi oo kala duwan oo aan ahayn heterosexual iyo cisgender. Waagii hore eraygan waxaa loo adeegsaday cay ama gef, inkasta oo ay maanta weli dadka qaar gef ku tahay. Gaar ahaan kuwa xusuustaa in eraygaas loo adeegsaday inuu waxyeello ujeedo fiican lahayn. Kuwa kale waxay u adeegsadaan ereygan si sharaf leh si ay isu aqoonsadaan.
Haddii aad qof u gudbinayso, ha u isticmaalin ereyga 'queer' ama wixii u dhigma, ugu yaraan haddii aad ogtahay in qofkaasi uu ku sifoobay ereygaas oo uusan dhib ka qabin. Markaad ka hadleyso qof iyo nooca galmada, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo ereyada uu qofku adeegsado. Sidan oo kale, waxaan dammaanad ka qaadaynaa in aan la caayi doonin ama la xumeyn doonin qofka la yiri. Waxa lagu soo dhaweynayo ayaa ah in qofka marka hore la weydiiyo nooca koox diimeed ee ay doorbidaan.
Marka loo eego asal ahaanta, waa kuwa runtii aan cidna u soo jiidan. Waxay u qaadan karaan qaabdhismeedka qofka inuu yahay mid soo jiidasho leh ama waxay jeclaan karaan inay yeeshaan xiriirro jacayl, laakiin ma xiiseeyaan inay galmoodaan ama ay la fal galaan galmo dad kale. Dadka Asexual waxay ku andacoodaan in galmo la'aantu aysan wax xiriir ah la lahayn jiritaanka lamaane. Oo waxaa jira xiriiro badan oo xubnahoodu waa kuwo jaceyl iyo soo jiidasho leh laakiin aan wax dan ah ka laheyn galmo ay wada yeeshaan.
Kooxdan dadka ah waxaa loo aqoonsan karaa inay yihiin khaniis, lesbian, bisexual ama heterosexual maadaama aysan dareensaneyn rabitaanka ah inay wax ka qabtaan dareenkaas qaab jinsiyeed laakiin qaab jaceyl ah. Wuxuu caadi ahaan fahamsan yahay inuu leeyahay baahiyo shucuur leh sida kuwa kale. Sidaa darteed, waxay leeyihiin xiriiro jacayl laakiin ma xiiseeyaan galmada. Qaabka ay dadka kale ugu dhowaadaan ama ugu dhawaanshahoodu ma aha jinsi.
Waxa jira dad kale oo aan jacaylku soo jiidan ama cidna Ma doonayaan inay yeeshaan xiriir jacayl waana kuwa loo yaqaan arromantic. Waa in maskaxda lagu hayaa in dadka aan jinsiga ahayn qaarkood laga yaabo inay yeeshaan soo jiidasho ama rabitaan ah inay la yeeshaan waxqabadyo jinsi ah kuwa kale oo ay la macaamilaan Dhanka kale, waxaan leenahay kuwa aan dareemin xamaasad yar. Waa wax caadi ah in qof kasta uu soo maro xilliyo uusan doonaynin galmo, laakiin macnaheedu maahan inay ahayd inaad galmo la’aan noqoteen. Intaas waxaa sii dheer, waa in sidoo kale maskaxda lagu hayaa in ahaanshaha qof galmo ah aysan la mid ahayn noqoshada. Celibacy waa go'aan ay dadku qaadan karaan wax xiriir ahna kuma lahan qofka aad tahay qof dabiici ah.
Sidoo kale waa inaan ku tashannaa sinaan la’aanta had iyo jeer maahan in lagu qeexo dhan ama wax aan jirin halkii, waxaa jira muuqaal dhameystiran oo u dhexeeya inuu noqdo qof khibrad u leh galmo dadka kale hortooda iyo inuu noqdo qof aan danayn galmo u lahayn qof kale Noocan dadka ah ma jiraan wax si xun u shaqeeya laakiin waxaa jira u janjeera inaan la rabin galmo. Waxa jira baadhitaano qaarkood oo muujinaya in 1kii qofba 100 ka mid ahi yihiin dad aan caadi ahayn.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto nooca galmada iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Jihada galmada
Sida loo xirto surwaal beige ah